WAR DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminaayo Prof. Jawaari oo goordhaw gaaray magaalada Jowhar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
WAR DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminaayo Prof. Jawaari oo goordhaw gaaray magaalada Jowhar
Wafdi uu hogaaminaayo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa goordhaw gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, halkaas oo maanta lagu dooranayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka Hirshabeele.
Wafdiga Prof. Jawaari oo maanta laga filaayay inay magaalada Jowhar soo gaaraan ayaa si aan caadi ahayn looga soo dhaweeyay garoonka magaalada Jowhar, waxaana safarka Prof. Jawaari uu yahay mid uu ku doonayo inuu goob-joog ka ahaado doorashada guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabeele oo lagu wado in saacadaha soo socdo ay si toos ah uga bilaabato halkaas.
Maalintii shalay ayay ahayd in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabeele, balse arrimo farsamo awgeed oo lasheegay ayay doorashadaasi dib uga dhacday.
Dhinaca kale, xildhibaanada maamulka Hirshabeele oo habeenkii xalay dhageystay khudbadaha seddax musharax oo ku tartamaya xilka gudoonka baarlamaanka ee maamulkaas ayaa saacadaha soo socdo la filayaa inay u codeeyaan shaqsiga rasmiga ah oo ay xilkaasi u dooran lahaayeen.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa in musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ay khudbadahooda soo jeediyaan maalinta berri, si markaasi 15-ka bishaan ay xildhibaanada maamulkaas u dooran lahaayeen shaqsiga qaban lahaa xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele.
Si kastaba ha ahaatee, xilliyadda soo socdo ayaa la filayaa in Prof. Jawaari uu khudbad ka jeediyo goobta ay doorashada ka dhici doonto ee magaaalda Jowhar, waxaana la ogaan doonaa qofkii loo doorto xilka guddoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeele oo haatan magaaladaasi ka socota.